Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Sorrento Therapeutics
Nidaamka Bixinta Lymphatic
La xidhiidh IR
Dib ugu laabo Dhuumaha
Taariikhda Dhaqan-galka: Juun 14, 2021
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ("Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah”) ayaa sharaxaya sida Sorrento Therapeutics, Inc. iyo la-hawlgalayaasheeda iyo la-hawlgalayaasheeda (wadajir, "Sorrento, ""us, ""we, "Ama"our”) ururiya, adeegsada, oo la wadaaga macluumaadkaaga khaaska ah ee laxidhiidha mareegaha, codsiyada, iyo marinada aanu ku shaqayno ee ku xidha siyaasadan khaaska ah (wadar ahaan, “Site"), Bogaggayaga warbaahinta bulshada, iyo isgaarsiinta iimaylka (si wadajir ah, iyo si wadajir ah bogga, "Service").
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah qasab maaha in lagu dabaqo macluumaadka shakhsiyeed ee laga yaabo inaad bixisay ama nagu siin doonto goobo aan ka ahayn dhanka ama goobta. Siyaasado gaar ah oo gaar ah ama dheeraad ah ayaa laga yaabaa inay khuseeyaan macluumaadka shakhsiyeed ee ay si kale u ururisay Sorrento, sida ee la xidhiidha tijaabooyinkayaga caafimaad, adeegyada shaybaadhka bukaanka, ama alaabta COVISTIX. Sorrento waxay xaq u leedahay, wakhti kasta, inay wax ka beddesho siyaasaddan khaaska ah. Haddii aan samayno dib u eegis wax ka beddelaya habka aan u ururino, u isticmaalno, ama u wadaagno macluumaadka shakhsiyeed, waxaan ku dhejin doonaa isbeddelladaas Siyaasaddan Khaaska ah. Waa in aad dib u eegtaa siyaasadan khaaska ah si aad ula socoto siyaasadayada iyo dhaqamadayada ugu badan. Waxaan ku xusi doonaa taariikhda dhaqan galka nooca ugu dambeeya ee Siyaasaddayada Qarsoonnimada oo ku taal xagga sare ee Siyaasaddan Qarsoonnimada. Isticmaalkaaga joogtada ah ee Adeegga ka dib dhajinta isbeddelada ayaa ka dhigan aqbalaaddaada isbeddeladaas.
MAGAALADA MACLUUMAADKA SHARCIYADA
Macluumaadka Shakhsi ahaaneed ee aad Bixiso. Waxa laga yaabaa inaan ururino macluumaadka shakhsiyeed ee soo socda ee aad ku bixiso Adeeggayada ama haddii kale:
Macluumaadka xiriirka, sida magaca, cinwaanka iimaylka, cinwaanka boostada, lambarka taleefanka, iyo goobta.
Macluumaadka xirfadeed, sida magaca shaqada, ururka, lambarka NPI, ama aagga khibradda.
Macluumaadka koontada, sida magaca isticmaalaha iyo erayga sirta ah ee aad abuurto haddii aad gasho portal-ka macmiilkayaga, oo ay la socoto xog kasta oo diiwaangelin ah.
Waxa aad rabtid, sida suuqgeyntooda ama doorbidkaaga isgaarsiinta.
Communications, oo ay ku jiraan macluumaadka la xidhiidha su'aalahaaga anaga iyo jawaab celin kasta oo aad na siiso markaad nala soo xidhiidho.
Macluumaadka Codsadaha, sida resumeygaaga, CV-gaaga, danahaaga shaqo, iyo macluumaadka kale ee aad bixin karto marka aad shaqo ama fursad noo codsanayso ama aad ka codsanayso macluumaadka ku saabsan fursadaha shaqo ee Adeegga.
Macluumaadka kale in aad doorato in aad bixiso laakiin aan si gaar ah halkan ugu taxan, kaas oo aan u isticmaali doono sida ku qeexan Siyaasaddan Qarsoonnimada ama si kale loo shaaciyay wakhtiga ururinta.
Xogta Shakhsiyeed Si Toos Ah Loo Ururiyaa. Anaga, adeeg bixiyayaashayada, iyo la-hawlgalayaashayada ganacsi waxa laga yaabaa in si toos ah macluumaadka adiga kugu saabsan, kombayutarkaaga, ama qalabkaaga moobilka iyo hawlahaaga geliso adeegayada iyo shabakadaha kale iyo adeegyada onlineka ah, sida:
Macluumaadka dhaqdhaqaaqa onlaynka ah, sida website-ka aad booqatay ka hor inta aanad u baadhin Adeegga, boggaga ama shaashadaha aad daawatay, muddada aad ku qaadatay bog ama shaashad, dariiqyada dhex mara boggaga ama shaashadaha, macluumaadka ku saabsan hawshaada bogga ama shaashadda, wakhtiyada gelitaanka, iyo muddada helitaanka.
Macluumaadka aaladda, sida kumbuyuutarkaaga ama qalabka moobilka nooca nidaamka hawlgalka iyo lambarka nooca, side wireless, soo saaraha iyo moodelka, nooca browserka, xallinta shaashadda, cinwaanka IP-ga, aqoonsiyada gaarka ah, iyo macluumaadka goobta guud sida magaalada, gobolka, ama aagga juqraafiga.
Kukiyadaha iyo Teknolojiyadaha la Mid ah. Sida adeegyo badan oo khadka ah, waxaan isticmaalnaa cookies iyo tignoolajiyada la midka ah si aan u fududeyno qaar ka mid ah xog aruurintayada tooska ah, oo ay ku jiraan:
cookies, kuwaas oo ah faylal qoraal ah oo ay shabakaduhu ku kaydiyaan aaladda booqdaha si ay si gaar ah u aqoonsadaan browserka booqdaha ama inay ku kaydiyaan macluumaadka ama goobaha browserka ujeedadu waxay tahay inay kaa caawiyaan inaad u dhex marato boggaga si hufan, xasuusashada doorbidkaaga, awood u yeelashada shaqeynta, inaga caawinaysa fahamka dhaqdhaqaaqa isticmaalaha. iyo qaababka, iyo fududaynta xayaysiinta onlaynka ah. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo our Siyaasadda Kukiyada.
Shabkada, sidoo kale loo yaqaan pixel tags ama GIF-yada cad, kuwaas oo sida caadiga ah loo isticmaalo si loo muujiyo in bogga internetka ama iimaylka la galay ama la furay, ama in waxyaabo gaar ah la daawaday ama la riixay, sida caadiga ah si loo ururiyo tirakoobka isticmaalka shabakadaha iyo guusha ololaha suuq-geynta.
Xogta Shakhsiyeed ee Laga Helay Dhinacyada Saddexaad. Waxa kale oo laga yaabaa in aanu ka helno macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed dhinacyo saddexaad, sida shuraakayaashayada ganacsiga, macaamiisheena, iibiyeyaasha, shirkadaha hoos yimaada iyo kuwa xidhiidhka la leh, bixiyayaasha xogta, la-hawlgalayaasha suuqgeynta, iyo ilo si guud loo heli karo, sida goobaha warbaahinta bulshada.
gudbinta. Isticmaalayaasha Adeegga waxaa laga yaabaa inay helaan fursad ay noogu soo gudbiyaan asxaabta ama xiriirada kale oo ay nala wadaagaan macluumaadka xiriirka. Fadlan ha na siin macluumaadka xiriirka qof ilaa aad fasax u heysato mooyee.
Macluumaadka Shakhsiyeed ee xasaasiga ah. Ilaa aan si gaar ah u codsan, waxaanu ku waydiisanaynaa inaadan na siin macluumaad gaar ah oo xasaasi ah (tusaale, macluumaadka la xidhiidha isir ama isir, fikrado siyaasadeed, diin ama caqiido kale, caafimaad, biometrics ama sifooyinka hidde, asalka dembi ama xubinnimada ururka shaqaalaha ) on ama iyada oo loo marayo Adeegga, ama haddii kale anaga.
ISTICMAALKA MACLUUMAADKA GAARKA AH
Waxaa laga yaabaa inaan u isticmaalno macluumaadkaaga gaarka ah ujeedooyinka soo socda iyo sida kale ee lagu sifeeyay siyaasadan khaaska ah ama wakhtiga ururinta.
Si loo bixiyo Adeegga. Waxaa laga yaabaa inaan u isticmaalno macluumaadkaaga gaarka ah:
bixinta iyo ku shaqaynta Adeegga iyo ganacsigeena;
la soco oo wanaaji khibradaada Adeegga;
samee oo ku ilaali akoonkaaga codsiyadayada ama portals-ka;
dib u eeg oo ka jawaab codsiyadaada ama su'aalahaaga;
kaala soo xiriiraan wax ku saabsan Adeegga iyo isgaarsiinta kale ee la xiriirta; iyo
Bixi agab, badeecooyin, iyo adeegyo aad codsato.
Cilmi-baarista iyo Horumarinta. Waxaa laga yaabaa inaan u isticmaalno macluumaadkaaga ujeedooyinka cilmi-baarista iyo horumarinta, oo ay ku jiraan horumarinta adeegga, fahamka iyo falanqaynta isbeddellada isticmaalka iyo dookhyada isticmaalayaashayada, oo aan horumarinno sifooyin cusub, shaqeyn, iyo adeegyo. Iyada oo qayb ka ah hawlahan, waxa laga yaabaa in aanu ka abuurno xog la isku daray, laga saaray, ama xog kale oo qarsoodi ah oo ka mid ah macluumaadka shakhsiyeed ee aanu ururino. Waxaan ka dhignaa macluumaadka gaarka ah xog qarsoodi ah annagoo meesha ka saarayna macluumaadka ka dhigaya xogta mid lagugu aqoonsan karo. Waxaa laga yaabaa inaan isticmaalno xogtan qarsoodiga ah oo aan la wadaagno qolo saddexaad ujeeddooyin ganacsi oo sharci ah, oo ay ku jiraan falanqaynta iyo horumarinta adeegga iyo horumarinta ganacsigeenna.
Suuq Direct. Waxaa laga yaabaa inaan kuu soo dirno xiriir laxiriira Sorrento ama xiriiro suuqgeyn toos ah sida uu sharcigu ogolyahay. Waxaa laga yaabaa inaad iska dhaafto isgaarsiinta suuqgeyneed sida lagu qeexay qeybta "Doorashadaada" ee hoose.
Xayeysiiska Ku Salaysan Danta. Waxaa laga yaabaa inaan la shaqayno shirkadaha xayeysiiska qolo saddexaad iyo shirkadaha warbaahinta bulshada si ay nooga caawiyaan xayeysiinta ganacsigeena iyo inaan ku soo bandhigno xayaysiisyada Adeegayada iyo shabakadaha kale. Shirkadahani waxa laga yaabaa inay isticmaalaan cookies iyo teknooloojiyada la midka ah si ay u ururiyaan macluumaadka adiga kugu saabsan (ay ku jiraan xogta qalabka iyo xogta waxqabadka khadka ee kor lagu sharaxay) wakhti ka dib adeegayada iyo shabakadaha kale iyo adeegyada ama xidhiidhkaaga iimaylkayaga, oo u isticmaal macluumaadkaas si aad ugu adeegto xayeysiisyadaas waxay u malaynayaan inay ku xiisayanayaan. Waxaad wax badan oo ku saabsan doorashooyinkaaga ka baran kartaa xaddidaadda xayaysiisyada ku salaysan xiisaha qaybta "Doorashadaada" ee hoose.
Codsiyada qorista iyo habaynta. Marka la eego hawlahayaga shaqo qorista ama codsiyadaada ama su'aalaha ku saabsan fursadaha shaqo ee Sorrento iyada oo loo marayo Adeegga, waxa laga yaabaa inaan u isticmaalno macluumaadkaaga shakhsiyeed si aan u qiimeeyo codsiyada, uga jawaabno su'aalaha, dib u eegista aqoonsiga, tixraacyada xiriirka, samaynta baaritaanka taariikhda iyo dib u eegista kale ee amniga, iyo haddii kale u isticmaal macluumaadka gaarka ah HR iyo ujeedooyinka shaqada la xiriira.
In loo hoggaansamo Shuruucda iyo Xeerarka. Waxaan u isticmaali doonaa macluumaadkaaga gaarka ah sida aan aaminsanahay inay lagama maarmaan tahay ama ku habboon tahay si aan ugu hoggaansanno sharciyada khuseeya, codsiyada sharciga ah, iyo habka sharciga ah, sida inaan ka jawaabno amar-qaadista ama codsiyada madaxda dawladda.
U Hogaansanaanta, Ka Hortagga Khiyaanada, iyo Badbaadada. Waxaa laga yaabaa inaan isticmaalno macluumaadkaaga gaarka ah oo aan siino sharci fulinta, mas'uuliyiinta dowladda, iyo dhinacyada gaarka ah sida aan aaminsanahay inay lagama maarmaan tahay ama ku habboon tahay: (a) ilaalinta amniga, amniga, iyo sharafta Adeegga, alaabada iyo adeegyadayada, ganacsiga, xogta macluumaadka iyo hantida kale ee tignoolajiyada; (b) ilaalino xuquuqdeena, adiga ama kuwa kale xuquuqdooda, sirnimadooda, badbaadada ama hantidayada (ay ku jirto samaynta iyo difaacida sheegashooyinka sharciga ah); (c) Baadhista habraacyadayada gudaha si loogu hoggaansamo shuruudaha sharciga iyo heshiiska iyo siyaasadaha gudaha; (d) Dhaqangelinta shuruudaha iyo shuruudaha u hoggaansamaya Adeegga; iyo (e) ka hortagga, aqoonsadaan, baaraan oo ka hortagaan wax isdaba marinta, waxyeelada, aan la ogolayn, falalka anshax-darrada ah ama sharci-darrada ah, oo ay ku jiraan weerarrada internetka iyo xatooyada aqoonsiga.
Oggolaanshahaaga. Xaaladaha qaarkood waxa laga yaabaa inaan si gaar ah ku waydiino ogolaanshahaaga si aad u ururiso, u isticmaasho, ama u wadaagto macluumaadkaaga khaaska ah, sida marka sharcigu farayo.
WADAAGGA MACLUUMAADKA GAARKA AH
Waxaa laga yaabaa inaan macluumaadkaaga shakhsiyeed la wadaagno hay'adaha iyo shakhsiyaadka hoos ku taxan ama sida si kale loogu sharraxay siyaasaddan khaaska ah ama goobta ururinta.
Shirkadaha laxiriira. Waxa laga yaabaa in aanu la wadaagno macluumaadka adiga kugu saabsan xubin kasta oo ka mid ah kooxdayada shirkadaha, oo ay ku jiraan kuwa raacsan, shirkaddayada gacanta ugu dambeysa, iyo kaabayaasheeda. Tusaale ahaan, waxaanu la wadaagi doonaa macluumaadkaaga khaaska ah shirkadahayaga la xidhiidha si aan kuu siino alaabtayada iyo adeegyadayada, halkaas oo shirkadaha kale ee kooxdayada ka mid ah ay qabtaan qaybaha adeegga buuxa ee bixinta.
Bixiyeyaasha Adeegga. Waxaan macluumaadka shakhsiyeed la wadaagnaa qolo saddexaad iyo shakhsiyaadka hawlo noo qabta oo naga caawiya socodsiinta ganacsigeena. Tusaale ahaan, adeeg bixiyayaasha waxay naga caawiyaan fulinta degelka martigelinta, adeegyada dayactirka, maaraynta xogta, falanqaynta shabakadda, suuqgeyn, iyo ujeedooyin kale.
Iskaashatada Xayeysiinta. Waxa kale oo laga yaabaa in aanu la wadaagno macluumaadka shakhsiyeed ee adiga kugu saabsan qolo saddexaad oo aanu kula shuraakoobayo ololaha xayaysiiska, tartamada, soo jeedinta gaarka ah ama dhacdooyinka kale ama hawlaha kale ee la xidhiidha Adeegga, ama ururiya macluumaadka ku saabsan hawshaada Adeegga iyo adeegyada kale ee khadka naga caawi xayaysiisyada alaabadayada iyo adeegayada, iyo/ama isticmaal liisaska macaamiisha ee aan la wadaagno iyaga si ay kuugu soo gudbiyaan xayaysiisyada adiga iyo isticmaalayaasha la midka ah ee ku jira qalabkooda.
Wareejinta Ganacsiga. Waxaa laga yaabaa inaan shaaca ka qaadno macluumaadka shakhsiyeed ee adiga kugu saabsan oo lala xiriirinayo macaamil ganacsi kasta (ama wax kala beddelasho) oo ku lug leh isku-darka, iibinta saamiyada ama hantida shirkadda, maalgelinta, la wareegidda, isku-darka, dib-u-habaynta, wareejinta, ama burburinta dhammaan ama qayb ee ganacsigeena (ay ku jirto xidhiidh la leh musalaf ama dacwado la mid ah).
Maamulka, Sharci fulinta, iyo kuwa kale. Waxa kale oo laga yaabaa in aanu siino macluumaadka lagaa soo ururiyey adiga oo siinaya sharci fulinta, masuuliyiinta dawladda, iyo qaybaha gaarka ah, haddii siidaynta lagama maarmaanka u tahay in loo hoggaansamo sharci kasta ama xeer kasta, iyada oo laga jawaabayo amar maxkamadeed, amar maxkamadeed, baadhitaan dawladeed, ama hab kale oo sharci ah, ama sida aan aaminsanahay inay lagama maarmaan u tahay u hoggaansanaanta iyo ujeedooyinka ilaalinta ee lagu sifeeyay qaybta cinwaankeedu yahay "Isticmaalka Macluumaadka Shakhsiyeed" ee kore.
La-taliyayaasha Xirfadlayaasha. Waxaa laga yaabaa inaan macluumaadkaaga shakhsiyeed la wadaagno shaqsiyaad, shirkado, ama shirkado xirfad leh oo siiya Sorrento talo iyo la-talin xagga xisaabaadka, maamulka, sharciga, canshuurta, maaliyadda, ururinta deynta, iyo arrimo kale.
WAREEJINTA CAALAMIGA AH EE MACLUUMAADKA GAARKA AH
Shirkadaha Sorrento qaarkood waxay xaruntoodu tahay Maraykanka, waxaanan ku leenahay adeeg bixiyayaasha Maraykanka iyo waddamo kale. Macluumaadkaaga gaarka ah waa la ururin karaa, la isticmaali karaa, oo lagu kaydin karaa Maraykanka ama meelo kale oo ka baxsan dalkaaga hooyo. Sharciyada sirta ah ee meelaha aan ku maamulno macluumaadkaaga shakhsiyeed waxaa laga yaabaa inaysan u ilaalin sida sharciyada gaarka ah ee dalkaaga hooyo. Adiga oo bixisa macluumaadkaaga khaaska ah, halka sharciga lagu dabaqi karo uu ogol yahay, waxaad halkan si gaar ah oo cad u ogolaatay wareejinta iyo habaynta iyo ururinta, isticmaalka, iyo siidaynta ee halkan lagu sheegay ama wax kasta oo adeeg ah oo khuseeya.
Isticmaalayaasha Yurub waxay eegi karaan qaybta hoose ee ciwaankeedu yahay "Ogaysiinta Isticmaalayaasha Yurub" wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan wareejinta macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed.
Ma jiro hab lagu gudbiyo intarneedka, ama habka kaydinta elegtarooniga ah, oo si buuxda ammaan u ah. In kasta oo aan isticmaalno dadaallo macquul ah si aan uga ilaalinno macluumaadkaaga shakhsiyeed khataraha ay soo bandhigtay gelitaan aan la oggolayn, ma dammaanad qaadi karno ammaanka macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Mareegaha iyo ADEEGYADA KALE
Adeeggu waxa uu ka koobnaan karaa isku xirka shabakadaha kale ee internetka iyo adeegyada onlaynka ah ee ay maamusho cid saddexaad. Xidhiidhiyayaashani maaha taageero, ama matalaad aan ku xidhanahay, qolo saddexaad. Intaa waxaa dheer, macluumaadkayaga waxaa laga yaabaa in lagu daro boggaga internetka ama adeegyada internetka ee aan nala xiriirin. Ma maamulno boggaga internetka ee qolo saddexaad ama adeegyada online-ka ah, mas'uulna kama nihin falalkooda. Mareegaha iyo adeegyada kale waxay raacaan xeerar kala duwan oo khuseeya ururinta, isticmaalka iyo wadaaga macluumaadkaaga shakhsiyeed. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad akhrido siyaasadaha khaaska ah ee mareegaha kale iyo adeegyada khadka ee aad isticmaasho.
Qaybtan, waxaan ku qeexaynaa xuquuqda iyo doorashooyinka ay heli karaan dhammaan isticmaalayaasha.
Emails Promotional. Waxa laga yaabaa inaad iska dhaafto iimaylada la xidhiidha suuq-geynta adiga oo raacaya ka bixista ama ka bixida tilmaamaha hoose ee iimaylka, ama adoo nala soo xidhiidha sida hoos lagu sharaxay. Waxa laga yaabaa inaad sii wadato helista iimaylada adeegga la xidhiidha iyo kuwa kale ee aan suuq-gaynta ahayn.
cookies. Fadlan nagu soo booqo Siyaasadda cookie Wixii macluumaad dheeraad ah.
Xulashada Xayeysiiska. Waxaad xaddidi kartaa isticmaalka macluumaadkaaga xayaysiisyada ku salaysan xiisaha adiga oo xannibaya cookies-ka qolo saddexaad ee ku jira goobaha biraawsarkaaga, addoo isticmaalaya browserka plug-ins/extensions, iyo/ama isticmaalka qalabkaaga mobaylka si aad u xaddiddo isticmaalka aqoonsiga xayaysiiska ee la xidhiidha qalabkaaga gacanta. Waxa kale oo aad ka bixi kartaa xayaysiisyada ku salaysan xiisaha shirkadaha ka qayb qaadanaya barnaamijyada ka bixista warshadaha ee soo socda adiga oo booqanaya mareegaha ku xidhan: Hindisaha Xayeysiinta Shabakadda (Network Advertising Initiative)http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp), Isbahaysiga Xayeysiinta Dijital ah ee Is-dhexgalka Yurub (loogu talagalay isticmaalayaasha Yurub - http://www.youronlinechoices.eu/), iyo Isbahaysiga Xayeysiinta Dijital ah (ka bixid.aboutads.info). Dookhyada ka bixida ee halkan lagu sifeeyay waa in lagu dejiyaa qalab kasta iyo/ama browserka aad rabto in lagu codsado. Fadlan la soco in aan sidoo kale la shaqeyno shirkadaha bixiya hababka ka bixitaankooda ama aan ka qaybgalin hababka ka bixista kor lagu sharaxay, markaa xitaa ka dib markaad baxdo, waxaad weli heli kartaa qaar ka mid ah cookies iyo xayeysiisyada ku salaysan xiisaha kale ee kale. shirkadaha. Haddii aad ka baxdo xayaysiisyada ku salaysan xiisaha, waxaad weli ku arki doontaa xayaysiisyada onlaynka ah laakiin waxa laga yaabaa inay ku yareeyaan adiga.
Ha la socon. Barowsarrada qaarkood ayaa laga yaabaa in loo habeeyo si ay u soo diraan calaamadaha "Ha Raad-raacin" adeegyada khadka ee aad booqato. Hadda kama jawaabno "Ha Raad-raacin" ama calaamadaha la midka ah. Si aad wax badan uga ogaato "Ha Raad-raacin," fadlan booqo http://www.allaboutdnt.com.
Diidmada Bixinta Xogta. Waxaan u baahanahay inaan aruurino macluumaadka shakhsiyeed si aan u bixino adeegyada qaarkood. Haddii aadan bixin macluumaadka la codsaday, waxaa laga yaabaa inaanan bixin karin adeegyadaas.
Ogaysiis ku socda Isticmalayaasha YURUB
Macluumaadka lagu bixiyay qaybtan waxay qusaysaa oo keliya shakhsiyaadka ku jira Midowga Yurub, Aagga Dhaqaalaha Yurub, iyo Boqortooyada Ingiriiska (wadar ahaan, "Europe").
Marka laga reebo sida si kale loo cayimay, tixraacyada "xogta gaarka ah" ee siyaasaddan khaaska ah waxay u dhigantaa "xogta shakhsi ahaaneed" ee ay maamusho sharciga ilaalinta xogta Yurub.
maamusha. Halka ay khusayso, maareeyaha macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ee ay daboolayso siyaasaddan khaaska ah ee ujeedooyinka sharciga ilaalinta xogta Yurub waa qaybta Sorrento ee bixisa Bogga ama Adeegga.
Saldhigyada Sharci ee Habaynta. Saldhigyada sharciga ah ee habaynta macluumaadkaaga khaaska ah sida lagu qeexay siyaasaddan khaaska ah waxay ku xirnaan doontaa nooca macluumaadka shakhsiyeed iyo macnaha gaarka ah ee aan ku socodsiino. Si kastaba ha ahaatee, saldhigyada sharciga ah ee aan sida caadiga ah ku tiirsannahay waxay ku qeexan yihiin shaxda hoose. Waxaan ku tiirsanahay danahayaga sharciga ah sida saldhiggayaga sharciga ah oo keliya marka danahaas aysan ka talaabsaneynin saameynta adiga kugu leh (haddii aan ogolaanshahaaga haysano ama habaynteena si kale loo baahan yahay ama sharcigu oggol yahay). Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan aasaaska sharciga ah ee sida aan u habaynno macluumaadkaaga shakhsiyeed, nagala soo xiriir Privacy@sorrentotherapeutics.com.
Ujeeddada Habaynta (sida kor lagu sharaxay qaybta "Isticmaalka Macluumaadka Shakhsi ahaaneed") Aasaaska Sharciga
Si loo bixiyo Adeegga Habayntu waa lama huraan si loo fuliyo qandaraaska xukuma hawlgalkayaga adeega, ama in la qaado tillaabooyinka aad codsato ka hor inta aanad hawlgelin adeegyadayada. Meesha aanan uga baaraandegi karin xogtaada shakhsi ahaaneed sida loogu baahan yahay si loogu shaqeeyo Adeegga sababo la xiriira baahi qandaraas, waxaanu u habaynaynaa macluumaadkaaga shakhsiyeed ujeedadan iyadoo ku saleysan dantayada sharciga ah ee aan ku siinayno alaabta ama adeegyada aad gasho oo aad codsato.
Cilmi Baarista iyo Horumarinta Habayntu waxay ku salaysan tahay danahayaga sharciga ah ee samaynta cilmi baarista iyo horumarinta sida lagu qeexay Siyaasaddan Khaaska ah.
Suuq Direct Nidaamintu waxay ku salaysan tahay oggolaanshahaaga halkaasoo oggolaanshahaas looga baahan yahay sharciga lagu dabaqi karo. Meesha ogolaanshahan aanu uga baahnayn sharciga khuseeya, waxaanu u habaynaynaa macluumaadkaaga khaaska ah ujeedooyinkan anagoo ku salayna danahayada sharciga ah ee aanu ku horumarinayno ganacsigeena oo aanu ku tusinayno nuxurka khuseeya.
Xayeysiiska Ku Salaysan Danta Nidaamintu waxay ku salaysan tahay oggolaanshahaaga halkaasoo oggolaanshahaas looga baahan yahay sharciga khuseeya. Meesha aan ku tiirsannahay ogolaanshahaaga waxaad xaq u leedahay inaad ka noqoto wakhti kasta habka lagu tilmaamay markaad ogolaatay ama gudaha Adeegga.
Si loo Qabto Codsiyada Habayntu waxay ku salaysan tahay danahayaga sharciga ah ee samaynta cilmi baarista iyo horumarinta sida lagu qeexay Siyaasaddan Khaaska ah.
In loo hoggaansamo Shuruucda iyo Xeerarka Habayntu waa lama huraan si aan ugu hogaansano waajibaadkeena sharciga ah ama iyadoo lagu salaynayo danahayaga sharciga ah ee shaqaaleysiinta iyo qorista. Xaaladaha qaarkood, habayntu waxa kale oo laga yaabaa inay ku salaysan tahay ogolaanshahaaga. Marka aan ku tiirsannahay ogolaanshahaaga waxaad xaq u leedahay inaad ka laabato wakhti kasta habka lagu tilmaamay markaad ogolaatay ama gudaha Adeegga.
U Hogaansanaanta, Ka Hortagga Khiyaanada, iyo Badbaadada Habayntu waxay lagama maarmaan u tahay in loo hoggaansamo waajibaadkayaga sharci ama iyadoo lagu saleynayo danahayada sharciga ah ee ilaalinta xuquuqdeena ama kuwa kaleba, sirnimadooda, badbaadada, ama hantidayada.
Oggolaanshahaaga Habayntu waxay ku salaysan tahay ogolaanshahaaga. Marka aan ku tiirsannahay ogolaanshahaaga waxaad xaq u leedahay inaad ka laabato wakhti kasta habka lagu tilmaamay markaad ogolaatay ama gudaha Adeegga.
U isticmaal Ujeeddooyin Cusub. Waxaa laga yaabaa inaan u isticmaalno macluumaadkaaga khaaska ah sababo aan lagu sifeyn Siyaasaddan Qarsoonnimada halka uu sharcigu ogolyahay sababtana ay la socon karto ujeedada aan u soo aruurinay. Haddii aan u baahanahay inaan u isticmaalno macluumaadkaaga shakhsiyeed ujeedo aan xiriir la lahayn, waan ku ogeysiin doonaa waxaanan kuu sharixi doonaa saldhigga sharci ee lagu dabaqi karo.
haynta. Waxaanu hayn doonaa xogtaada khaaska ah ilaa iyo inta lagama maarmaanka ah si loo fuliyo ujeedada ururinta, oo ay ku jiraan ujeedooyinka qancinta sharci kasta, xisaabinta, ama shuruudaha warbixinta, si loo dhiso loona difaaco sheegashooyinka sharci, ujeedooyinka ka hortagga khiyaanada, ama inta loo baahan yahay si aan u gudano waajibaadkeena sharci.
Si loo go'aamiyo wakhtiga haynta ku haboon ee macluumaadka shakhsiyeed, waxaanu tixgelinaynaa qadarka, dabeecadda, iyo dareenka macluumaadka shakhsiyeed, khatarta ka iman karta isticmaalka aan la ogolayn ama shaacinta macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed, ujeedooyinka aan u habayneyno macluumaadkaaga shakhsiyeed iyo haddii kale waxaan ku gaari karnaa ujeeddooyinkaas siyaabo kale, iyo shuruudaha sharci ee lagu dabaqi karo.
Xuquuqdaada. Sharciyada ilaalinta xogta Yurub waxay ku siinayaan xuquuqo gaar ah oo khuseeya macluumaadkaaga shakhsiyeed. Waxaa laga yaabaa inaad na weydiisato inaan qaadno tallaabooyinka soo socda ee la xiriira macluumaadkaaga shakhsiyeed ee aan hayno:
Access. In aan ku siino macluumaadka ku saabsan habbayntayada xogtaada gaarka ah oo aan ku siino marin u helka macluumaadkaaga khaaska ah.
Sax ah. Cusbooneysii ama sax khaladaadka ku jira macluumaadkaaga shakhsiyeed.
delete. Tirtir macluumaadkaaga khaaska ah.
Transfer. Ku wareeji koobi macluumaadkaaga khaaska ah ee mishiinku akhriyi karo adiga ama qolo saddexaad oo aad dooratay.
Xakamee. Xakamee socodsiinta macluumaadkaaga shakhsiyeed.
UJEEDDO. Ujeedo ku tiirsanaanta danahayaga sharciga ah ee saldhig u ah socodsiinta macluumaadkaaga shakhsiyeed ee saameeya xuquuqdaada.
Codsiyadan waxaad ku soo gudbin kartaa adigoo nagala soo xidhiidhaya Privacy@sorrentotherapeutics.com ama cinwaanka boostada ee hoos ku qoran. Waxa laga yaabaa in aanu kaa codsano xog gaar ah si ay nooga caawiso xaqiijinta aqoonsigaga iyo hab-socodka codsigaaga. Sharciga lagu dabaqi karo ayaa laga yaabaa inuu u baahdo ama noo ogolaado inaan diidno codsigaaga. Haddii aan diidno codsigaaga, waxaan kuu sheegi doonaa sababta, iyadoo ay ku xiran tahay xannibaado sharci ah. Haddii aad jeclaan lahayd inaad soo gudbiso cabasho ku saabsan isticmaalkeena macluumaadkaaga khaaska ah ama jawaabtayada codsiyadaada ee ku saabsan macluumaadkaaga shakhsiyeed, waxaad nala soo xidhiidhi kartaa ama aad u gudbin kartaa ashtako maamulaha ilaalinta xogta ee xukunkaaga. Waxaad heli kartaa maamulaha ilaalinta xogtaada halkan.
Wareejinta Xogta Xuduudka. Haddii aan u wareejino macluumaadkaaga khaaska ah waddan ka baxsan Yurub si nalooga baahan yahay inaan ku dabaqno ilaalin dheeraad ah macluumaadkaaga khaaska ah ee hoos yimaada sharciyada ilaalinta xogta Yurub, waanu samayn doonaa. Fadlan nala soo xidhiidh wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan wareejinta noocaas ah ama ilaalinta gaarka ah ee la dabaqay.
Haddii aad hayso su'aalo ama walaac ku saabsan siyaasaddayada khaaska ah ama arrimo kale oo gaar ah ama amniga, fadlan noogu soo dir emailka Privacy@sorrentotherapeutics.com ama noogu soo qor ciwaanka hoose: Sorrento Therapeutics, Inc.
4955 Agaasimayaasha Goobta
© 2022 Sorrento Therapeutics, Inc. All Rights Reserved. Shuruudaha isticmaalka | Horey u-eegista Warbixinta | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Siyaasadda Kukiyada | Ogeysiisyada